China abenzi beglasi beshiti yeglasi kunye nabathengisi | Gokai
Umzi-mveliso wethu unamava eminyaka eli-10 + ngokwemveliso kunye nokuthumela kwelinye ilizwe. Ukoneliseka kwimarike yethu yemveliso kuphezulu kune-95% nge-SGS, CE, isiqinisekiso se-ISO. Sigxila kumgangatho weglasi yeglasi ye-acrylic. Malunga nobukhulu kunye noxinano, ingqalelo kulawulo lomgangatho kunye nenkonzo elungileyo kubathengi bethu.
Iphepha leglasi le-Acrylic
Ukuxinana 1.2g / cm3
Ukutyeba 1.8mm, 2mm, 2.5mm, 2.8mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm ...... ukuya kuthi ga kwi-100mm
Umbala Nawuphi na umbala ulungile, njengokucacileyo, iqabaka, i-opal, mhlophe, bomvu, luhlaza, mnyama, mnyama, mhlophe, imini nobusuku, isipili, njl. Sinokwenza umbala owenziwe ngokwezifiso ngokusekwe kwiimfuno zakho ezizodwa.
Izinto eziphathekayo I-100% ye-Mitsubishi ekrwada impahla
Umgangatho Iishiti zethu zeglasi ze-acrylic zihambelana ne-CE / SGS / RoHS izitifiketi
MOQ Iitoni ezi-2 okanye ipallet yomthi
1.We ngumthengisi weglasi we-acrylic oqeqeshiweyo onamava angaphezulu kweminyaka eli-10 yamava okuthumela ngaphandle
2. Ukoneliseka kwimarike yemveliso yethu kungaphezulu kwama-95%.
3. Sinenkampani eqinisekisiweyo ye-CE kunye ne-SGS.
4. Iphepha lethu leglasi ye-acrylic engafakwanga kwiminyaka eyi-8-10 yokusetyenziswa kwangaphandle.
5.Ukunyamezelana kwesinyithi seglasi ye-acrylic kungaphantsi kwe-± 0.1mm.
6. Iphepha lethu leglasi ye-acrylic linamandla amakhulu kunye nokuchasana kwamachiza aphezulu.
7. Ulwenziwo lwethu iyafumaneka: anti-UV. kukhokelela simahla, isandi sigqunyiwe, et
8. Sikwinkonzo yakho iiyure ezingama-24 kwi-intanethi.
9. I-OEM kunye ne-ODM ziyafumaneka.
Egqithileyo Iphepha leplastikhi ye-acrylic
Okulandelayo: iphepha le-acrylic
Iphepha le-Acrylic Cast
Phosa iiPhepha zeAcrylic kufutshane nam